Ungasazi kanjani isikhathi sokuqalisa sekhompyutha yethu nge-Systemd? | Kusuka kuLinux
Ungasazi kanjani isikhathi sokuqalisa sekhompyutha yethu nge-Systemd?
I-Systemd Yi-daemon entsha yohlelo lwe-boot efakwa ukusatshalaliswa okuningi okuthathe indawo endala Init.
Bazondwe ngabaningi (kubandakanya uLinus Torvalds othumele ngesizathu esizwakalayo ukuthi athumele omunye wohlelo bakhe ukuba ahambe), ethandwa abanye, kuseyiqiniso ukuthi ngale kwezinkinga uSystemd angaba nazo "ngokwefilosofi", ukwabiwa okukutholile kukhombise i-boot isikhathi siphansi kakhulu kunokunye.
Futhi yilokho kanye lokhu okuthunyelwe okumayelana nakho, ngikukhombisa umyalo olula ozosikhombisa isikhathi sokuqalisa seKernel nendawo yokusebenza.
Mina, ngine-ArchLinux efakwe ku-Caché SSD, ene-KDE 4.12.4, ngakho-ke ngathola umphumela olandelayo:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungasazi kanjani isikhathi sokuqalisa sekhompyutha yethu nge-Systemd?
I-Systemd kimi ibukeka ihamba phambili, angikaze ngiyibone into efana nayo. Futhi isimo se-systemctl sinikeza imininingwane eminingi ukusiza ukulungisa amaphutha athile. Bheka okwami:
[maykel @ maykel-arch akonadi] $ systemd-hlaziya
Ukuqalisa kuqedile kuma-1.785s (kernel) + 1.511s (indawo yomsebenzisi) = 3.296s
Ngicabanga ukuthi uma uthi isilondolozi se-ssd, usisebenzisa kuphela ukulayisha i-OS boot kanye nokugcina izinhlelo zokusebenza ozivula kusilondolozi se-ssd. Nginakho konke ku-128 GB ssd efanayo.
Ama-SSDs enqolobane angamadiski e-SSD abanye abakhiqizi abawasebenzisela iWindows ukuthi bawasebenzise njengeMemori ebonakalayo. Ngiyakuqonda ukuthi kushibhile futhi "kubi" kune-SSD ejwayelekile. Ku-Cache ye-SSD ngineSystem efakiwe eshiya idatha yami ye-mechanical disk 😀
Kusukela ekuqaleni ngithe iSystemD ingenye yezinto ezinhle ze-linux. Kusukela ekuqaleni ngithe uDebian uzoyamukela futhi izizathu zingaphezulu kokusobala. Ama-Btrf nawo futhi yingakho amaseva wami, ama-laptop kanye nama-pc asevele ekhona. Futhi ngiyakuvuma lokho impela, kahle kakhulu 😀
Futhi awuthokozile yini ngokusebenza okusha kwe-Btrfs (ukwengezwa kwezimpawu ezinwetshiwe)?
Kuyiqiniso ukuthi aziziningi (azikho, ngingasho) izinhlelo ezizisebenzisayo, kepha amathuba awapheli.
kungithatha isikhathi eside:
Ukuqalisa kuqedile kuma-2.961s (kernel) + 24.178s (indawo yomsebenzisi) = 27.140s
Ngingayenza kanjani ukuthi iqale ngokushesha? Ngoba ngiyayibona ngempela
Kuzofanele ufake i-SSD. 🙁
Hhayi-ke ngizoba ngcono kanjena hahaha
Kukutshela isikhathi senkonzo ngayinye
Ukuqalisa kuqedile kuma-3.416s (kernel) + 15.543s (indawo yomsebenzisi) = 18.960s
Idrayivu yami enkulu yi-SATA 2 7200RPM.
Iqiniso ukuthi iSystemD isebenza kahle impela, ushintsho belubonakala. Sengikhulumile, angazi ukuthi kuphi, ngomehluko, kepha njengoba konke kuyizinto zobuchwepheshe, bengingaqondi lutho
U-Adolfo Rojas G. kusho
Ukuqalisa kuqedile kuma-3.605s (kernel) + 25.651s (indawo yomsebenzisi) = 29.257s
Ngingasithuthukisa kanjani isikhathi sokuqalisa somshini wami: ((Ngine-kernel 3.8 nesinamoni njengendawo yedeskithophu, ngiku-archlinux)
Phendula u-Adolfo Rojas G.
Isikhathi sokuqalisa sizothuthuka kuphela ngokusebenzisa i-SSD. Yize ezingeni leSoftware ungenza ushintsho oluthile, i-SSD yisixazululo.
Isikhathi sokuqalisa se-KaOS kwi-msata SSD:
Ukuqalisa kuqedile kuma-1.082s (kernel) + 1.343s (indawo yomsebenzisi) = 2.425s
Isilevu sentshebe kusho
Ngaphezu kwesikhathi esiphelele, izinketho zingangezwa ukukhombisa eminye imininingwane:
systemd-hlaziya ukusolwa kuhlunga isikhathi sazo zonke izinqubo kusuka phezulu kuya phansi
i-systemd-ihlaziya uchungechunge olubucayi ikhombisa izingqinamba ezingaba khona ngezikhathi zokuqala.
Siyabonga ngolwazi ..
Ukuqalisa kuqedile kuma-2.089s (kernel) + 6.680s (indawo yomsebenzisi) = 8.770s
Lokho kunginike i-KaOS nge-disk yemishini, ngicabanga ukuthi i-kaos isisombululo eshibhile esisheshayo sebhuthi kune-ssd: p. Futhi angifuni ukucabanga ukuthi waqala nini ngenye yalezo.
Iqiniso ngukuthi i-kernel ithatha isikhathi eside ukuqala ... Kepha hey, ngicabanga ukuthi yizinto ze-monolithic kernel 😛
Into yabasebenzisi iyamangaza.
Ngizamile ukusebenzisa umyalo kepha impendulo enginikeza yona yile:
bash: systemd-hlaziya: umyalo awutholakali
Ngine-Debian Wheezy efakiwe.
Njengoba i-oda lingatholakali, ngabe kufanele ngifake okuthile ngaphambi kwesikhathi?
Njengoba i-athikili isho, umyalo owezinhlelo ezisebenzisa iSystemD njenge-init, ku-Debian Wheezy SysVinit isetshenziswa ngakho-ke lo myalo ngeke ukusebenzele, mlingani.
Ngibonga kakhulu ngokucaciswa kweYukiteru. Enye into eyodwa umuntu ayifunda kuleli zwe elithakazelisayo le-GNU / Linux
Imizuzwana engu-7 !!! okukhulu kakhulu. Umbuzo owodwa, ngabe wenze okuthile okukhethekile ukufaka i-arch kule cache ye-ssd?
Noma yisiphi iseluleko sendlela yokwehlisa lezi zikhathi?
Ukuqalisa kuqedile kuma-1.371s (kernel) + 4.005s (initrd) + 56.367s (indawo yomsebenzisi) = 1min 1.744s
Njengenjwayelo, lapha, kunezeluleko ezinhle kakhulu.
Ngokomyalo, nakhu okuphonsayo kimi:
Ukuqalisa kuqedile kuma-2.395s (kernel) + 26.193s (indawo yomsebenzisi) = 28.588s
Futhi okwenziwa yibhodlela, yilokhu:
sokuqhafaza @ 26.193s
@Pdnsd.service @ 26.192s
NhlakaCele eMkhazini @ 26.192s
Nge-WD Blue 500GB
Ukuqalisa kuqedile kuma-4.051s (kernel) + 11.885s (indawo yomsebenzisi) = 15.936s
Ibhodlela lami lingu-3
InethiwekhiManager.service @ 6.332s + 5.153s
Iqiniso ukuthi lokhu kuyangikhathaza: S
Ngikhohliwe ukukhuluma nge-distro. IManjaro ngeGnome (uhlelo lomphakathi). Futhi i-mechanical hard drive.
Ukuqalisa kuqedile kuma-3.266s (kernel) + 12.302s (indawo yomsebenzisi) = 15.568s
futhi ngine-SSD! Yize / ikhaya likudiski yomshini.
Uma ngabe ukugcinwe ekhabetheni ngiyangabaza ukuthi uzobona umehluko 😉
Ngikusho ngoba angiboni ukuthi kuyashesha kakhulu
Futhi lokho, ngine-disc yemishini futhi sengineminyaka embalwa ngisebenza kahle. Idiski okukhulunywa ngayo yile: Maxtor 6L250S0
Ngakolunye uhlangothi, lapho ngithola le disk futhi ngokuya nge-tune2fs:
Isistimu yefayela idaliwe: Lwesibili Oct 12 11:28:03 2010
Futhi kuhanjiswe kuso sonke leso sikhathi:
Isikhathi sokuphila siyabhala: 1353 GB
Noma, ngiyazi ukuthi kungani umphathi wenethiwekhi enaleso sikhathi, futhi i-pdnsd incike kokugcina ukuze isebenze.
Sawubona! Ngingathanda ukwazi ukuthi ngingalwenza kanjani lolu vivinyo ku-Mint ... Sanibonani!
ayitholakali ku-elementaryOS, yeka ihlazo elingakanani, ngoba sasinempi ebangayo kudala nabangane abathile e-fedora: '(
Ukuqalisa kuqedile kuma-2.111s (kernel) + 5.034s (indawo yomsebenzisi) = 7.145s
enye indlela yokwenza ngcono indawo yokusebenzisa (kufanele ngicishe amafayela ?? XD)
0.75 Imizuzwana !!! I-WUAO
Ngiyabonga umnikelo mngani
Ku-linux mint bekuzokwenziwa kanjani?
Yebo ngine-Intel E2140 CPU, i-2GB ye-RAM, i-GMA950 edidiyelwe namadiski amabili (i-SATA1 ye-148GB lapho uhlelo lukhona, i-IDE ye-40GB), nginakho lokhu:
Ukuqalisa kuqedile kuma-2.794s (kernel) + 17.784s (indawo yomsebenzisi) = 20.578s
Akukho okubi. Ngendlela, i-Archlinux x86. Umkhawulo wami yi-disk.
Ukuqalisa kuqedile kuma-1.731s (kernel) + 2.882s (initrd) + 4min 48.866s (userspace) = 4min 53.480s
$ systemd-hlaziya ukusolwa
I-4min 33.660s bumblebee-nvidia.insizakalo
Sawubona unjani ... yeyi ukuthi ngingasinciphisa kanjani isikhathi somsebenzisi, ngoba kubonakala kimi ukuthi zingama-34.151s aaaww bengivele ngazi ukuthi kuthathe isikhathi eside
I-Kim4: Hlela okuncamelayo kwesithombe sakho kalula ku-KDE
Ungasishintsha kanjani isithombe sakho sangemuva ku-KDE, i-GNOME ne-XFCE ngokuzenzakalela